Alakamisy, May 1, 2014 Friday, May 2, 2014 Douglas Karr
Omaly aho dia nifampiresaka tsara tamin'i Brad Shoemaker, manam-pahaizana momba ny haino aman-jery iray eo an-toerana izay efa ela no nanandrana nanintona ny radio ho amin'ny vanim-potoana niomerika. Sendra niditra tao amin'ilay birao ny namana iray hafa, Richard Sickels. Richard dia nanana tantara tsara tamin'ny radio ihany koa. Niresaka taonina iray momba ny indostrian'ny radio izahay ary nanohy nieritreritra izany halina. Raha mbola mihena ny fivarotana rivotra ary mitohy ny fanjakan'ny radio
Ny fanohanana ara-barotra dia manome lanja lehibe mihoatra ny fahitan'ny marika sy ny fivezivezena amin'ny tranokala. Ireo mpivarotra manam-pahaizana ankehitriny dia mitady izay hahazoany tombony betsaka amin'ny fanohanana, ary ny fomba iray hanaovana izany dia ny fampiasana ireo tombony azo avy amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana. Mba hanatsarana ny fanohana ara-barotra miaraka amin'ny SEO, mila mamantatra ireo karazana mpanohana isan-karazany misy ianao sy ireo mason-tsivana ilaina amin'ny famakafakana ny sanda SEO. Haino aman-jery nentim-paharazana - Tonga matetika ny pirinty, ny fahitalavitra, ny radio amin'ny alàlan'ny media mahazatra
Douglas Karr ao amin'ny Edge of the Web Radio
Talata, Aogositra 7, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Nahafinaritra niaraka tamin'ny namana Erin Sparks tao amin'ny Edge of the Web radio (misoratra anarana amin'ny iTunes) ny sabotsy lasa teo. Niady hevitra momba ny infografika vitsivitsy izahay, valin'ny karoka facebook, paikady atiny ary media sosialy. Erin sy ny ekipany dia mamokatra ny seho isa-kerinandro ary mipetraka any Indianapolis. Afaka mihaino mivantana amin'ny alàlan'ny pejy fandraisana WXNT ihany koa ianao. Raha tsy nanana fotoana hihainoana ilay fizarana ianao - ity ny ampahany voalohany. Zahao hoe
Talata, Novambra 11, 2008 Alakamisy 13, 2008 Douglas Karr
Fanambarana nataon'ny filoham-pirenena amerikana tamin'ny andron'ny veterans, manome voninahitra ny fanompoana sy ny fahafoizan-tena ataon'ireo lehilahy sy vehivavy izahay izay niaro ny fahafahantsika nanao ny fanamiana amerikanina tamim-pahasahiana. Nanomboka tamin'ny ala sy ny ala tany Eoropa rotidrotiky ny ady ka hatrany amin'ny ala any atsimo atsinanan'i Azia, nanomboka tany an'efitra Irak ka hatrany an-tendrombohitra Afghanistan, ireo tia tanindrazana be herim-po dia niaro ny filamatra an'ny Firenentsika, namonjy olona an-tapitrisany
Fotoana milamina amiko ny fihainoana ny onjam-peo handeha hiasa. Na inona na inona fifamoivoizana, dia toby falifaly aho. Fihenan'ny fifamoivoizana? Tsy misy olana… ireo DJs hitarika ahy hamaky ary hanomboka ny andro tsy fiasana…. Hatramin'ny omaly…. Tsy afaka mitsahatra ny mieritreritra an'izany aho. Mihaino doka mahafinaritra amin'ny radio aho momba ny tovolahy tsy tia ny tsiron'ny kafe. Ny safidy - Mountain Dew. Ando-tendrombohitra? Dew Dew!